विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताको छलफल सकियो, के के भयो निर्णय ? - सुनाखरी न्युज
विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताको छलफल सकियो, के के भयो निर्णय ?
Posted on: May 25, 2021 - 4:34 pm
विपक्षी गठबन्धनका ५ पाँच दलका शीर्ष नेताबीचको छलफल सकिएको छ । उनीहरुबीच सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटपछि अपनाउनुपर्ने आगामी रणनीतिका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । त्यस्तै छलफलमा कानुनी लडाइँबारे कसरी अघि बढ्ने र कतिपय सांसदहरुको ठेगानामा भएको त्रुटीलाई सच्चाउने विषयमा पनि छलफल भएको सहभागी काँग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए ।
सिंहदरबारस्थित काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलबीच छलफल भएको हो ।